Lalan’ny Atody – Mahitsy : 30 Tapitrisa Dolara ny fanamboarana -
AccueilSongandinaLalan’ny Atody – Mahitsy : 30 Tapitrisa Dolara ny fanamboarana
Lalan’ny Atody – Mahitsy : 30 Tapitrisa Dolara ny fanamboarana
Notanterahina omaly teny amin’ny kaomina Mahitsy, distrikan’Ambohidratrimo ny fametrahana ny vato fototry ny fanamboarana ny Lalan’ny Atody (Route des Oeufs). Ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no tonga nanatanteraka ny tsatok’angady voalohany ho mariky ny fanombohan’ny asa notronin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta sy ireo olo-manan-kaja maro.
Ny Fanjakana Sinoa no miantoka ny fanamboarana ny Lalan’ny Atody, izay mirefy 19,087 km mampitohy sy mampifandray ny kaomina Mahazaza sy ny kaomina Ampanotokana amin’ny Lalam-pirenena fahefatra (RN4). Voalaza fa mitentina 30 Tapitrisa Dolara ny teti-bidin’ny fanamboarana.
Raha ny mahakasika ny Lalan’ny Atody manokana, dia omen’ny Repoblika entim-bahoakan’i Sina maimaim-poana an’i Madagasikara ny fanamboarana azy. Ny fivondronan’orinasa Sinoa CCCC First Highway Consultant Co, Ltd sy ny Xi’an Fangzhou Engineering Consulting Co., Ld, kosa no mitantana ny tetikasa ary ny orinasa Zhongmei Engineering Group Co., Ltd kosa no mandray an-tanana ny fanamboarana. Telo taona indray ny faharetan’ny asa.
Raha ny fanazavana, amin’ny totalin’ny lalana mirefy 19, 087 km, ny lalana maventy amin’izany mirefy 10,455 km, ary ireo lalana madinika kosa mirefy 8,632 km. Horakofana tara ity lalana hasiam-panamboarana ity, ary hisy ny fametrahana fantsona goavana ahafahan’ny rano mikoriana. Hisy ny fanamboarana tetezana sy fametrahana toeram-piantsonan’ny taksibe ary ny aro lozan’ny fifamoivoizana.
Nambaran’ny masoivohon’i Sina, Yang Xiaorong, monina sy miasa eto amintsika tamin’izany fa ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no anton’ny fanamboarana ny Lalan’ny Atody. Eo ihany koa ny fanalana ny fahasahiranan’ireo mpiompy sy mpamboly amin’ny fivezivezen’ny vokatra ao amin’ireo kaomina ireo, indrindra fa ny atody izay tena ifotoran’ny mponina any an-toerana.
Ankoatra izay, anisan’ny distrika nahazo fotodrafitrasa be indrindra tamin’ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny distrikan’Ambohidratrimo. Nambaran’ny Filoha mantsy fa mitentina 600 Tapitrisa Dolara ny teti-bidin’ny fotodrafitrasa azon’ity distrika eto amin’ny Faritra Analamanga ity. Anisan’izany ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, ny lalana mampitohy an’Ivato sy Antananarivo Renivohitra, ny fananganana toho-drano goavana mitondra herinaratra ao Farahantsana, ny fanamboarana hopitaly eny Anosiala, sns.
Kandida 8 amin’ ireo 36 sisa andrasana, dia ho feno ny isan’ireo mpitam-bolan’ny antoko. Nanamafy ny kaomisiona mpanara-maso ny volan’ny antoko, fa didian’ny lalàna izy ireo hametraka izay olona izay. Mba hanamora ny asan’ny mpitam-bola ...Tohiny